ဂိမ်းကစားရင်း ဆုကြီးတွေအများကြီးဆွတ်ခူးဖို့ MyTelenor App ရဲ့ Luckyတံတားဂိမ်းလေးကိုအခုပဲဆော့ကစားလိုက်ပါ။း
1000 GB အထိ ရယူလိုက်ပါ။
Normal Theme မှာ ဘယ်လို ဆော့ကြမလဲ
၁။ Lucky chances များကိုရယူရန် Game Card ကို နှိပ်ပြီး ဂိမ်းကို စတင်ကစားပါ။
2. Game Lading Page
၃။ ဂိမ်းကို စတင်ကစားပါ။
၄။ Bridge ကိုချိန်ညှိပြီး ကစားပါ။
၅။ သင်သည်ဂိမ်း၏အဆင့်မြင့်မြင့်ကိုရောက်ခဲ့လေလေ ပိုမိုမြင့်မားသောဆုရရှိရန် အခွင့်အလမ်းများများရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
၆။ သင်ရရှိခဲ့သည့် ဆုစာရင်းကိုစစ်ဆေးပါ။
Premium Theme မှာ ဘယ်လို ဆော့ကြမလဲ
၁။ Normal Theme နှင့် ၅ ကြိမ်ကစားပြီးနောက် Premium Theme ဖြင့်ဂိမ်းကစားရန်အခွင့်အရေးရယူပါ
၂။ Premium Theme ဖြင့် ကစားရန် Noti ရရှိပါလိမ့်မည်။
၄။ သင်သည်ဂိမ်း၏အဆင့်မြင့်မြင့်ကိုရောက်ခဲ့လေလေ ပိုမိုမြင့်မားသောဆုရရှိရန် အခွင့်အလမ်းများများရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
Share Game Data Bonus to your Friends
Bridge Game က Data တွေကို ဘယ်လို Share ကြမလဲ
၁။ သုံးစွဲသူသည် 1GB အထက်အပိုဆုကြေးအနိုင်ရရှိပြီးနောက် “Data Share” ခလုတ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
၂။ “မျှဝေမည့်ဒေတာပမာဏ” နေရာတွင် မျှဝေမည့် ဒေတာပမာဏကိုထည့်ပြီး“မျှဝေမည့်လူအရေအတွက်” နေရာတွင် မျှဝေမည့်လူအရေအတွက်ကိုထည့်ပါ။
၃။ Social Media သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် media group တွင်မဆိုဒေတာအပိုဆုကြေး ကို Share ပါ။
၅။ ဒေတာအပိုဆုမျှဝေခြင်းကို Share History page တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
Bridge Game က Data တွေကို ဘယ်လို Claim ကြမလဲ
၁။ မည်သည့်သုံးစွဲသူမဆို အပိုဆု link ကိုရရှိထားသောသူသည် share game data bonus ကို နှိပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။
၂။ သုံးစွဲသူများသည် Telenor Prepaid နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်ပြီး အပိုဆုကြေးရရှိရန် “Get data share” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
၃။ မျှဝေသည့်သူထံမှ အပိုဆု ရရှိပြီးတစ်ပြိုင်နက် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ရရှိထားသော အပိုဆုကြေးကိုတွေ့မြင်ရပါမည်။
Lucky Bridge ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၁။ တယ်လီနောမြန်မာ (“တယ်လီနော”) မှ Lucky Bridge ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် (“ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်”) ကာလမှာ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ (သက်မံသက်တမ်းတိုးရန် မကြော်ငြာသရွေ့) (“ကံစမ်းမဲ ကာလ”) ဖြစ်သည်။ တယ်လီနော ဝန်ဆောင်မှု သုံးစွဲသူများမှ Lucky Counts များအား ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ည ၂၃နာရီ ၅၉ မိနစ် (မြန်မာ စံတော်ချိန်) မတိုင်မီ သုံးစွဲရမည်ဖြစ်သည်။ ကံစမ်းမဲ ကာလ ကျော်လွန်သည်အထိ မသုံးစွဲရသေးသော Lucky Counts များမှာ ဤ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်နှင့် အကျုံး မဝင်ပေ။ ကံစမ်းမဲ ကာလအား တယ်လီနောမှ မိမိတဦးတည်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အချိန်မရွေး ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၂။ ဤ ကံစမ်းမဲ အစီစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းမှ တယ်လီနော Lucky Bridge ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များ (“စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ”)၊ ပြင်ဆင်ချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား လိုက်နာရန် သဘောတူညီသည်ဟု မှတ်ယူမည် ဖြစ်သည်။ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား ပြင်ဆင်မှု တစုံတရာ ရှိပါက My Telenor application မှတဆင့် ကြော်ငြာ မည် ဖြစ်ပြီး ကြော်ငြာသည်နှင့် တပြိုက်နက် အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ တယ်လီနောမှ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အစားထိုးခြင်း အပါအဝင် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပြောင်းလဲခွင့် ရှိသည်ဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲချက်အား ကြော်ငြာသည်နှင့် တပြိုက် နက် အကျိုး သက်ရောက် မည် ဖြစ်သည်။ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သူများ အနေဖြင့် ဂိမ်းအစီအစဥ်အား ဝင်ရောက်ကစား သည် နှင့် ဤ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူညီသည် မှတ်ယူခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။
၃။ ဤ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်သည် တယ်လီနော ဖုန်းများ၏ ကြိုတင်ငွေဖြည့်သွင်းသည့် ဝန်ဆောင်မှု (prepaid) သုံးစွဲသူအားလုံး အတွက် ဖြစ်သည်။ (“တယ်လီနော ၏ ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူ”) ဤ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်သို့ ဝင်ရောက် ကံစမ်းချင်သူ တယ်လီနော၏ ဝန်ဆောင်မှု သုံးစွဲသူများသည် “My Telenor” application” အား ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် သုံးစွဲရန် လိုအပ်သည်။
၄။ အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဤကံစမ်းမဲ အစီစဉ်တွင်ပါဝင်ခြင်းအား တားမြစ်ထားသည် (“ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းအား တားမြစ်ထားသူများ”)
(က) တယ်လီနော ၏ အချိန်ပြည့်၊ အချိန်ပိုင်း၊ ယာယီ၊ အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်းများ
(ခ) တယ်လီနောအား ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသူများ (Service Provider) ၊ တယ်လီနောနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေသော မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများ (Business Partner) နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများအား
(ဂ) တယ်လီနော၏ Productနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း (sale or distribution) တို့တွင် ပါဝင်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများအား ဤ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ဝင်ရောက်ကံစမ်းခြင်းအား တားမြစ်ထားသည်။
ကံစမ်းဆုမဲ တစ်ခုကိုဆွတ်ခူးရရှိပြီးသူ အပါအဝင်၊ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည့် မည်သူနှင့်စပ်လျင်း၍ မဆို တရားဝင် အတည် ဖြစ်မှုအား တယ်လီနောမှ မိမိတစ်ဦးတည်းသဘောဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းအား တားမြစ်ထား သူ များမှ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်အား ကံထူးခဲ့ပါက ဆုလက်ဆောင်များ အား တယ်လီနောမှ မိမိသဘော ဖြင့် ပြန်လည်သိမ်းယူခွင့်နှင့် ပယ်ဖျက်နိုင်ခွင့်တို့ရှိသည်။
၅။ တယ်လီနော ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူ များသည် တယ်လီနော ၏ မည်သည့် ပက်ကေ့ချ် မဆို MyTelenor App, Web, USSD, SMS နှင့် E-load တို့မှဝယ်ယူပြီး ဤကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ (“ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိသူ”) ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိသူများသည် ကံစမ်းမဲ ကာလ အတွင်း ဖုန်းဘေလ် ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ Flexi Plan နှင့် Myanmar net wifi ပက်ကေ့ခ်ျ အပါအဝင် ပက်ကေ့ခ်ျ ဝယ်ယူသည့် ငွေပမာဏအလိုက် ကံစမ်းမဲ ကာလတွင် ကံစမ်းမဲလက်မှတ်များ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
o ၁၀၀၀ကျပ် နှင့်အောက် = ကံစမ်းခွင့်လက်မှတ် (Lucky Count) ၁ ခု
o ၁၀၀၁ကျပ် နှင့် ၃၀၀၀ ကျပ် ကြား= ကံစမ်းခွင့်လက်မှတ် (Lucky Counts) ၂ ခု
o ၃၀၀၁ကျပ် နှင့် ၅၀၀၀ ကျပ် ကြား= ကံစမ်းခွင့်လက်မှတ် (Lucky Counts) ၃ ခု
o ၅၀၀၁ ကျပ်အထက် = ကံစမ်းခွင့်လက်မှတ် (Lucky Counts) ၅ ခု
၆။ တယ်လီနော ၏ မည်သည့် ပက်ကေ့ခ်ျ မဆို ဝယ်ယူပြီးသည်နှင့် ကံစမ်းမဲလက်မှတ်(Lucky Count)အား MyTelenor Application ၏ ပင်မစာမျက်နှာရှိကံစမ်းမဲအစီအစဉ် ကြေညာထားသောနေရာကိုနှိပ်ပြီး ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကံစမ်းမဲ လက်မှတ်များကို ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူထားသည့်အချိန်မှစတင်ပြီး ၄၈နာရီအတွင်း MyTelenor Application တွင်ဝင်ရောက်ရယူ နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ၄၈နာရီအတွင်း ကံစမ်းမဲလက်မှတ်(Lucky Count) ရယူခြင်းမရှိသောသူများအား ၎င်းတို့ ဝယ်ယူထား သည့်ပက်ကေ့ခ်ျအတွက် ကံစမ်းမဲလက်မှတ်(Lucky Count)များ အစား ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း၊ လျှော်ကြေး ပြန်လည်ပေးခြင်းတို့ ရှိမည်မဟုတ်ပေ။
၇။ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း အပိုဒ် (၆)နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ထားသော ကံစမ်းခွင့်လက်မှတ် (Lucky Count) အား အစီအစဉ်ပြီးဆုံးရက် အထိသာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် ပြီးဆုံးပြီးနောက် သက်တမ်းကုန်သွားသော ကံစမ်းခွင့်လက်မှတ် (Lucky Count) အတွက် လျော်ကြေး ပြန်လည် ပေးအပ်မည် မဟုတ်ပေ။ ကံစမ်းမဲ လက်မှတ်တစ်စောင် (Each Lucky Count)အတွက် MyTelenor Application တွင် ဝင်ရောက်ပြီး တံတားတည်ဆောက်သည့်ဂိမ်းအစီအစဥ် (Lucky Bridge) တွင် ပါဝင်ကစားရင်း ဆုလက်ဆောင်များ ရယူနိုင်ခွင့် (“ဂိမ်းကစားခွင့်”) မှာ တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။
၈။ ဤကံစမ်းမဲ အစီစဉ်ရှိ ဂိမ်းအား တပတ်လျှင်(၅)ကြိမ်အထက် ပါဝင်ဆော့ကစားသူများမှာ ၄င်းဂိမ်းအား တပတ်အတွင်း (၆)ကြိမ် မြောက် ဝင်ရောက်ကစားသည့်အခါ Premium themes ဖြင့် ကစားခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ၄င်း Premium themes မှာ အပတ်စဉ် တနင်ဂနွေနေ့ရောက်တိုင်း မူလပုံစံသို့ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၉။ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိသူများမှ ဤကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်နှင့် တပြိုက်နက် တံတားတည်ဆောက် သည့် ဂိမ်း(Lucky Bridge) ကစားနည်း ကစားရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအား သိရှိလိုက်နာရန် လိုအပ်သည် (“ဂိမ်းကစားသူ”)။ ထိုသို့သိရှိ လိုက်နာရမည့် ဂိမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဉ်းများမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) ဂိမ်းတွင် level အဆင့် (၆) ဆင့်ပါရှိသည်။ ဂိမ်းကစားသူမှ levelမြင့်မြင့် နိုင်လေ ဆုလက်ဆောင် များများ (မြင့်မြင့်) ရလေ ဖြစ်သည်။
(ခ) ဂိမ်းကစားသူမှ levelများအား ကျော်ဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် တံတားအား ဟန်ချက်ညီညီဖြင့် တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။
(ဂ) ဂိမ်းကစားသူမှ phone screen အားနှိပ်ပြီး တံတားအား တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
(ဃ) တံတားမှာ အတားအဆီးများထက် တိုတောင်းခြင်း (သို့) ရှည်လျားခြင်းတို့ဖြစ်နေပါက ဂိမ်းထဲရှိဇာတ်ကောင်မှာ ရေထဲသို့ကျသွား ပြီး ဂိမ်းအစ level အဆင့် (၁)မှ စတင်ပြီး ပြန်လည်ဆော့ကစားရမည် ဖြစ်သည်။
(င) ဂိမ်းကစားသူမှ level အဆင့်တွင် (၁)အား ဖြတ်ကျော်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ဂိမ်းအစမှစတင်ပြီး ဆော့ကစား ရမည် ဖြစ်ပြီး မည်သည့် ဆုလက်ဆောင်မျှရရှိမည် မဟုတ်ပေ။ ဂိမ်းကစားသူမှ level အဆင့် (၁)အထက်သို့ ဆော့ကစားနိုင်မှသာ ၎င်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည့် အမြင့်ဆုံး level အဆင့်အတွက် ဆုလက်ဆောင် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ (ဥပမာ- ဂိမ်းကစားသူမှ ဂိမ်းအား level အဆင့် (၄) တွင် ရှုံးခဲ့ပါက level အဆင့် (၃) အောင်မြင်ခဲ့သည့်ဆုလက်ဆောင်အား ရရှိမည်ဖြစ်သည်။)
(စ) ဂိမ်းကစားသူမှ မည်သည့် level အဆင့်ကို ကျော်ြဖတ်နိုင်လျှင် မည်သို့သော်ဆုလက်ဆောင်ရရှိနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မှ အာမခံထား ခြင်းမရှိပါ။
၁၀။ ဂိမ်းကစားသူမှ ၎င်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည့် အမြင့်ဆုံး level အဆင့်အတွက် Instant Prizes (နေ့စဉ်ပေးအပ်သည့် ဆုလက်ဆောင်)များ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ Instant Prizes (နေ့စဉ်ပေးအပ်မည့် ဆုလက်ဆောင်)များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
Instant Prizes (နေ့စဉ်ပေးအပ်သည့် ဆုလက်ဆောင်)များ
- Free Internet Data (MB)
- Free On-net Call
- Free On-net SMS
ဆုလက်ဆောင်ပေးအပ်မည့် တန်ဖိုးနှင့် အရည်အတွက်မှာ တယ်လီနောြမန်မာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာဖြစ်သည်။ ဆုလက်ဆောင် ခွဲဝေပေးအပ်သည့် တွက်ချက်မှုပုံစံမှာလည်း တယ်လီနောြမန်မာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာဖြစ်သည်။
၁၁. Free Internet Data (MB)၊ Free On-net Call နှင့် Free On-net SMS (“Telco Prizes”)တို့ရရှိသည့် ကံထူးသူများ အနေဖြင့် ဆု လက်ဆောင် ရရှိသည်နှင့် တဆက် တည်း ၎င်းတို့ဖုန်း၏ Call balance၊ Internet data balance နှင့် SMS balance ထဲသို့ သက်ဆိုင်ရာ ဆု လက်ဆောင် များ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ Telco Prizes များအတွက် သုံးစွဲရန် အချိန်ကာလ မှာ (၃)ရက်ဖြစ်သည်။ Free On-net Call နှင့် Free On-net SMS ဆုလက်ဆောင် များ သည် တယ်လီနော သုံးစွဲသူအချင်းချင်းသာ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်သည့် ဆုလက်ဆောင် ဖြစ်ပါသည်။ ရရှိထားသည့် ဆုလက်ဆောင်များ အနက် Free Internet Data (MB) တစ်ခုတည်းသာလျှင် အခြား တယ်လီနော prepaid ဆင်းကဒ်သုံးစွဲများသို့ လွှဲပြောင်း ပေးအပ် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ (“ဒေတာဆု”)
၁၂။ ဂိမ်းကစားသူမှ ဤ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ဂိမ်းဝင်ရောက်ကစားပြီး အနည်းဆုံးဒေတာဆု 500MB ရရှိထားမှသာ အခြားသူသို့ လွှဲပြောင်း ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်သည်။ (“ဒေတာ လက်ဆောင်”) ဂိမ်းကစားသူမှ မိမိရရှိထားသော ဒေတာ လက်ဆောင် ပမာဏထက် ကျော်လွန်ပြီး အခြားသူသို့ လွှဲပြောင်း လက်ဆောင်ပေးအပ်ခြင်း မပြုရ။ ၎င်းတို့မှ “Share” သည့်ခလုတ် နှိပ်ပြီး လွှဲပြောင်း လက်ဆောင် ပေးအပ်လိုသော လူအရေအတွက် နှင့် စုစုပေါင်း Free Internet Data ပမာဏအား သက်မှတ်နိုင်သည်။ ဂိမ်းကစားသူမှာ ဒေတာ ပမာဏ ဝေငှသည့်အခါတိုင်း လက်ခံရယူမည့်သူ အရေအတွက်ကို အနည်းဆုံး (၃) ဦးမှ အများဆုံး (၁၀၀)ဦးသို့ သက်မှတ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကစားသူမှ သက်မှတ်ထားသည့် စုစုပေါင်း လွှဲပြောင်း လက်ဆောင်ပေးအပ်လိုသည့် Free Internet Data ပမာဏမှ လက်ခံမည့် သူများအား ကျပမ်းစနစ်ဖြင့် ဒေတာလက်ဆောင် ပမာဏ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၁၃။ ဂိမ်းကစားသူမှ အခြား တယ်လီနော ဖုန်းသုံးစွဲသူများ (“လက်ခံရယူသူ”) သို့ ဒေတာ လက်ဆောင်များအား Social media (သို့) အခြား media channelများမှတဆင့် ပေးအပ်နိုင်သည်။ (ဥပမာ- Facebook, messenger, Viber, Instagram များမှ တဆင့်) ဒေတာ လက်ဆောင်ရယူသူမှ ဒေတာလက်ဆောင်ပေးပို့သူ၏ ဖုန်းနံပါတ်အား မြင်တွေ့ သိရှိနိုင်သည်ကို ဂိမ်းကစားသူမှ သိရှိနားလည် သဘော တူပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဂိမ်းကစားသူမှ ၎င်း ဝေမျှ (share)ခဲ့သည့် ဒေတာလက်ဆောင်အား လက်ခံရယူသူမှ သုံးစွဲရန် ရယူသည် ဖြစ်စေ မရယူသည်ဖြစ်စေ မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ ပြန်လည် ရယူခြင်း/ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိပါ။ ဒေတာ လက်ဆောင် ဝေငှ (share)သည့် link မှာ ဝေငှ (share)ပြီး ၃ရက်အကြာတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကစားသူမှ ဒေတာ လက်ဆောင် ဝေငှ (share) ခဲ့သည့်၃ရက်အတွင်း လက်ခံရယူသူမှ ၎င်း linkအား အခြား တယ်လီနော ဖုန်းသုံးစွဲသူများသို့ ထပ်မံ ဝေငှ (share)နိုင် သည်။
၁၄။ တယ်လီနော prepaid ဆင်းကဒ်သုံးစွဲသူမှသာ ၎င်း ဒေတာ လက်ဆောင်အား ရယူသုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဒေတာ လက်ဆောင် လက်ခံရယူသူမှ ၎င်းသုံးစွဲနေသော တယ်လီနော prepaid ဆင်းကဒ်နံပါတ် ဖြည့်သွင်းမှသာ အဆိုပါ ဒေတာ လက်ဆောင်အား ရယူ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒေတာ လက်ဆောင် လက်ခံရယူသူမှ ဖြည့်သွင်းခဲ့သော တယ်လီနော prepaid ဆင်းကဒ်နံပါတ်ထဲသို့ ၎င်းရရှိသည့် ဒေတာ လက်ဆောင်ပမာဏများမှာ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်သွားပြီး ရရှိ သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၁၅။ ဒေတာ လက်ဆောင်မှာ လက်ခံရယူသူမှ စတင်ရယူခဲ့သည့် (၃)ရက်အတွင်းသာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ လက်ခံရယူသူမှ ဒေတာ လက်ဆောင်လက်ခံမည့် တယ်လီနော prepaid ဆင်းကဒ်နံပါတ်ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် အခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာပါက တယ်လီနောမှ ဆုလက်ဆောင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် နေ့ရက်ပါဝင်သည့် SMSအား ဒေတာ လက်ဆောင် လက်ခံမည့် တယ်လီနော ဖုန်းနံပါတ်သို့ ပေးပို့မည် ဖြစ်သည်။
၁၆။ Instant Reward များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူ များ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ရှိ “My Telenor” app (Lucky Bridge) မှတဆင့် ကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိသူ မှ ကံထူးသည်နှင့် တပြိုက်နက် ၎င်းကံထူးရှင်အား “My Telenor” app မှတဆင့် အသိပေး အကြောင်း ကြားမည် ဖြစ်သည်။ တယ်လီနောမှ ကံထူးရှင်ရရှိမည့် ဆုလက်ဆောင် အမျိုးအစားနှင့် ပမာဏ ၎င်းဆုလက်ဆောင်အား အသုံးပြုရန် အချိန်ကာလတို့အား ကံထူးရှင်၏ ဖုန်းနံပါတ်သို့ SMS messageပေးပို့သွားမည် ဖြစ်သည်။ ဆုလက်ဆောင် ရရှိသူများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့ လက်ခံရရှိသည့် SMS တွင်ပါဝင်သည့် ဆုလက်ဆောင် ကူပွန်ကဒ်နံပါတ်အား တစ်ကြိမ် သာ အသုံးပြုခွင့် ရမည်ဖြစ်သည်။ နေ့တနေ့ချင်းစီအလိုက်ပေးအပ်မည့် Instant Reward ဆု၏ အရေအတွက်ပမာဏကို တယ်လီနောမှ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်း နေ့ တစ်နေ့တာ တွင် ပေးရန် သတ်မှတ်ထားသော ဆုအားလုံးကို ဆွတ်ခူး ရရှိသူများသို့ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပြီးမှ နောက်တွင် အဆိုပါ နေ့၏ဂိမ်းအစီစဉ်သို့ ဝင်ရောက်ကစားလာသော သူများအတွက် Instant Rewardဆုများ ချဲ့ထွင် ပြုလုပ် ပေးအပ်ရန် အတွက်တယ်လီနောတွင် တာဝန်မရှိချေ။
၁၇။ Instant Prizes (နေ့စဉ်ပေးအပ်သည့် ဆုလက်ဆောင်)များမှာ ရရှိပြီး အချိန်ကာလ (၃)ရက်အတွင်း အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအချိန် ကာလကျော်သွားလျှင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည် ဖြစ်သည်။ ဒေတာဆုလက်ဆောင်မှာ လက်ခံရယူသူမှ ရယူ သုံးစွဲသည့် နေ့မှစပြီး ရရှိပြီး အချိန်ကာလ (၃)ရက်အတွင်း အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအချိန် ကာလကျော်သွားလျှင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည် ဖြစ်သည်။
၁၈။ ထိန်းချုပ်ခြင်းဌာ မစွမ်းသာသည့် မမျှော်လင့်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များ (ဥပမာ- နက်ဝက်ပြတ်တောက်ခြင်း) ကြောင့် Instant Prizes (နေ့စဉ်ပေးအပ် သည့် ဆုလက်ဆောင်)များ၏ သက်တမ်းကျော်လွန်သွားပါက တယ်လီနော မြန်မာတွင် တာဝန်မရှိပေ။
၁၉။ ကံထူးရှင်မှ Lucky Bridge ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်၌ ရရှိခဲ့သော ဆုလက်ဆောင်များ နှင့် ဝေမျှခဲ့သည့် ဒေတာဆုလက်ဆောင်များ စာရင်းကို “My Telenor” app၏ History နေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၂၀။ တယ်လီနောမှ သက်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလအတွင်း အသုံးပြုခြင်းမရှိသော ကံစမ်းမဲ လက်မှတ် (lucky count) နှင့် ဒေတာ လက်ဆောင် များအတွက် တာဝန်မရှိပေ။
၂၁။ ဥပဒေ အရ အဆိုပါ ဆုလက်ဆောင်အား ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ယူဆရန် မဖြစ်နိုင်သူများအားလည်း တယ်လီနောမှ ဆု လက်ဆောင် ပေးအပ် ရန်ငြင်းပယ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤစာပိုဒ်ပါ ဆုလက်ဆောင်များ ပေးအပ်ရန် ငြင်းပယ်ခွင့် ရှိသော အချက်များ အရ တယ်လီနော သည် မိမိကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆုလက်ဆောင်များအား ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ထိုဆုလက်ဆောင်များအား ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၂၂။ ဒေတာလက်ဆောင် ပေးအပ်သူနှင့် ရယူသူတို့အကြား အငြင်းပွားမှုတစုံတရာ ဖြစ်ပေါ်လာပါက တယ်လီနောနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။ ထို့အပြင် နည်းပညာချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အမှားများ၊ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုများ၊ အချိန်ကြံ့ကြာမှုများ၊ အင်တာနက် နက်ဝက် မရခြင်း နှင့် တယ်လီနောမှ ထိန်းချုပ်ရန် မစွမ်းသာသော အခြေအနေများ အစရှိသည်တို့ ကြောင့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် တွင် ပါဝင် ကံစမ်းသည့်သူများ အပေါ် သက်ရောက်မှု/ဆုံးရှုံးမှု တစုံတရာ ရှိခဲ့ပါက အဆိုပါ ဆုံးရှုံးမှုများအား တယ်လီနောမှ တာဝန်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူ ခြင်းမပြုရ။
၂၃။ တယ်လီနော (သို့) မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများမှ သက်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလတွင် ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့သော ကံထူးရှင်များ (သို့) တယ်လီနော၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား လိုက်နာမှု မရှိသူများအား တယ်လီနောမှ သင့်တော် သည်ဟု ထင်မြင် သည့် အတိုင်း မည်သည့် ဆုလက်ဆောင် ကိုမဆို ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ထိုဆုလက်ဆောင်များအား ပြန်လည် အသုံး ပြုခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခွင့် ရှိသည်။
၂၄။ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ် အလို့ဌာ ဒေတာမျှဝေခြင်း မပြုလုပ်ရ။ ထို့အပြင်တယ်လီနော (သို့) မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများမှ ဆုလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အား လဲလှယ်ပေးခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း နှင့် ငွေကြေး အစားထိုးပေးအပ်ခြင်း တို့ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်။ ဆုလက်ဆောင် ရရှိသူမှ မိမိလက်အတွင်း ဆုလက်ဆောင် ရရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် မိမိကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ် ချက်ဖြင့် ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲ သင့်တော်သလို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆုလက်ဆောင်ပေါ်တွင် သက်မှတ်ထား သည့် နေ့ရက်မတိုင်မီ အသုံးပြုရန် (သို့) လက်ခံရရှိရန် ပါရှိပါက ဆုလက်ဆောင် ရရှိသူမှ အဆိုပါနေ့အား ထပ်မံသက်တမ်းတိုးခြင်း (သို့) အစားထိုးခြင်း တို့ ပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်း မပြုနိုင်ပါ။ တယ်လီနောမှ ပေးအပ်သော လက်ဆောင်ပစ္စည်းများအတွက် အာမခံပေး ခြင်းများ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်။ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိသူ မှ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား နားလည်ပြီး လိုက်နာရန် သဘော တူညီသည်ဟု မှတ်ယူခြင်း ပြုမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရရှိသည့် ဆုလက်ဆောင်အတွက် အခွန်ပေးအပ်ရ ခြင်းများရှိ ပါကအဆိုပါ အခွန် ပေးအပ်ခြင်းမှာ ကံထူးသူ ၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
၂၅။ ဤကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် တယ်လီနောမှ ကံထူးသူ၏ ရုပ်ပုံ၊ အသံတို့အား အသုံးပြု၍ ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယို ရိုက်ကူး ခြင်း၊ အင်တာဗျူး ပြုလုပ်ခြင်း၊ လှုမှုကွန်ယက်များတွင်ဖြစ်စေ၊ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုခုတွင်ဖြစ်စေ ၊ ထုတ်လွှင့် ခြင်း၊ လွှင့် တင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ အခြားကြော်ငြာ လက်ကမ်းစာစောင်တွင်ဖြစ်စေ၊ ပိုစတာ တစ်မျိုးမျိုးတွင်ဖြစ်စေ ရိုက်နှိပ် ဖော်ပြခြင်း များ အားဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိ သည်ဟု မှတ်ယူရမည် ဖြစ်သည်။
၂၆။ တယ်လီနောမှ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အခြေအနေထက်ပိုသော ကိစ္စရပ်များတွင် ကံထူးသူ ရရှိသည့် ဆုမဲများအား တယ်လီနောမှ လဲလှယ်ခွင့် နှင့် အခြား ဆုမဲများ အစားထိုးပေးအပ်ခွင့်တို့ရှိသည်။
၂၇။ ဤကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းကာ အငြင်းပွားဖွယ် တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက တယ်လီနောမြန်မာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ကသာ အတည်ဖြစ်ပါမည်။
၂၈။ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား ချိုးဖောက်သော သူတို့အား တယ်လီနောမှ ကံစမ်းမဲတွင် ပါဝင် ကံစမ်းရန် ငြင်းပယ်ခွင့်၊ ဆုလက်ဆောင်များ ပေးအပ်ရန် ငြင်းပယ်ခွင့်များ အပြည့်အဝရှိသည်။
၂၉။ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား တယ်လီနောမှ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်၊ ပယ်ဖျက်နိုင်ခွင့်၊ ဆိုင်းငံ့နိုင်ခွင့်နှင့် ပြင်ဆင် နိုင်ခွင့် တို့ရှိသည်။
၃၀။ ကံထူးသူမှာ တယ်လီနောမှ လိုအပ်မည်ဟု ထင်မြင်ယူဆသည့် စာရွက်စာတမ်းများအား လက်မှတ်ထိုးခြင်း၊ တင်ပြခြင်းတို့ ပြုလုပ် ရမည်ဖြစ်သည်။
၃၁။ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများမှ လွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရားရုံး၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင် ရှိမည်ဖြစ်သည်။
၃၂။ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများသည် မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ၂ဘာသာရှိရာ ၎င်းတို့၂ခုကြား ကွဲလွဲမှုရှိပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ အတည် ဖြစ်သည်။
MyTelenor app 3.21 ကို app store သို့မဟုတ် google play store မှ download ပြုလုပ် ရယူနိုင်ပြီး ဖော်ပြထားတဲ့ QR code မှလဲ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Lucky တံတားဆိုတာ ဘာလဲ
Lucky တံတားဆိုတာ MyTelenor App တွင်သာရနိုင်တဲ့ Lucky Draw Campaign တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Customers များသည် ဂိမ်းဆော့ရင်း နေ့စဉ်လက်ငင်း ဆုလက်ဆောင်များကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ Telenor ၏မည်သည့် channel မှမဆို Package ဝယ်ယူရပါမည်။ ပြီးရင် MyTelenor App ရှိ "Lucky တံတား" ကဒ်ကိုနှိပ်ပြီး lucky chance များရယူရပါမည်။ Package ဝယ်ယူပြီးရရှိမည့် lucky chance အရေအတွက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အောက် lucky chance ၁ ခု
၁၀၀၁ နှင့် ၃၀၀၀ ကျပ် lucky chance ၂ ခု
၃၀၀၁ နှင့် ၅၀၀၀ ကျပ် lucky chance ၃ ခု
၅၀၀၀ ကျပ်အထက် lucky chance ၅ ခု
Package ဝယ်ယူ (သို့) ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီး ၄၈ နာရီအတွင်း MyTelenor သို့ဝင်ရောက်ကာ ရရှိထားသော lucky chance များကိုရယူရမည်။ အသုံးမပြုရသေးသော lucky chance များအား ကံစမ်းမဲကာလာအပြီးတွင် ပယ်ဖျက်ပါမည်။
Note : Lucky Chance များသည် Package ဝယ်ယူ ပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့အချိန်များတွင် ၁၀ မိနစ်မှ မိနစ် ၃၀ အထိကြာနိုင်သည်။
ချက်ချင်းပေါက် ချက်ချင်းယူဆုအတွက် ဘယ်လိုဆော့ကစားရမလဲ?
Lucky chance ၁ ခုကို ၁ ခါဆော့ကစားခွင့်ရှိသည်။ ဖုန်းမျက်နှာပြင်၏မည်သည့်နေရာ၌မဆို ဖိ၍ တံတားတစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။ အတားအဆီးကိုရှောင်ရှားရန်နှင့် ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်သို့တက်ရန် သင်၏ဖုန်းကိုချိန်ညှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
•ဆုအားလုံးသည် ပြက္ခဒိန်ရက် ၃ ရက်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
သင်အဆင့်မြင့်လေလေပိုမိုမြင့်မားသောဆုရရှိရန်သင်၌မြင့်မားသောအခွင့်အလမ်းများရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အဆင့် (၃) တွင်ရေထဲသို့ကျသွားပါက အဆင့် ၂ အတွက်အောင်မြင်ခဲ့သောဆုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ (အကယ်၍ သင်သည်အဆင့် ၆ တွင်ရေထဲသို့ကျခဲ့ပါက အဆင့် ၅ အတွက်အောင်မြင်ခဲ့သောဆုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။)
Lucky တံတားဂိမ်းရဲ့ Theme တွေက ဘာတွေလဲ?
Lucky တံတားဂိမ်းကို ကစားသည့်အခါ ဂိမ်းနောက်ခံ background တွင် Normal Theme နှင့် Premium Theme ဟု၍ Theme၂ မျိုးရှိပါသည်။ ဂိမ်းကို ဆော့ကစားသည့်အခါ ရရှိလာမည့် ဆုများသည် ဂိမ်းနောက်ခံ background ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားမှုများ ရှိပါသည်။
သင်သည် ဘယ်အချိန်မှာ Premium Theme နှင့် ကစားနိုင်သလဲ?
သင်သည် တစ်ပတ်အတွင်း Normal Theme ဖြင့် ၅ ကြိမ် ကစားပြီးပါက ၆ ကြိမ်မြောက် စတင်ကစားသည့်အချိန်တွင် ဂိမ်းနောက်ခံ background သည် Premium Theme ဖြင့်ကစားနိုင်ပါသည်။ Premium Theme တွင် Normal Theme ထက် ပိုမိုမြင့်မားသော ဆုလက်ဆောင်များကို ရယူနိုင်ပါသည်။
၎င်း Premium themes မှာ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ရောက်တိုင်း မူလပုံစံသို့ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
မူလအပိုဆုများ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ နောက်ထပ်ဆုထပ်မံရရှိပါက သက်တမ်းတိုးပါမည်လား?
မူလသက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ နောက်ထပ်အပိုဆုများ ရရှိခဲ့ပါက ရရှိသောနေ့မှစတင်ပြီး သက်တမ်းရှိသလောက်တိုးသွားပါမည်။
Lucky တံတား မှ Data Share ဆိုတာဘာလဲ?
Data Shareသည် Lucky တံတား ၏လက်ကျန်ဒေတာမှ အပိုဆုဒေတာမျှဝေခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
မည်သူက Data Share ကို အခြားသူများသို့ မျှဝေပေးနိုင်မလဲ?
Lucky တံတား ဂိမ်းမှရရှိသော 1GB နှင့်အထက် data များအပိုဆုရရှိသူ မည်သူမဆို data ဆုကိုအခြားသူများအားဝေမျှရန် ရရှိလာသော pop-up တွင် “ဒေတာဝေမျှခြင်း” ခလုတ်ပေါ်လာမည်။ (သို့မဟုတ်) ဂိမ်း page တွင်လည်း ဒေတာဝေမျှခြင်းကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
Data Share အပိုဆုကိုဘယ်လိုဝေမျှမလဲ?
Share data volume နှင့် မျှဝေနိုင်မည့်အကြိမ်အရေအတွက်ကိုသတ်မှတ်ပြီးနောက် data share link သည်အလိုအလျောက်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်သည်(Facebook, messenger, whatsapp, viber, email …စသည်ဖြင့်) လူမှုဆက်သွယ်ရေးဆိုဒ်များတွင် မျှဝေနိုင်ပါမည်။
Data Share မှ Data ဘယ်လောက်များများကို မျှဝေနိုင်မလဲ?
သင်၏ ဂိမ်းမှ ရရှိထားသော ဒေတာလက်ကျန်ပမာဏထက်မများသော ဒေတာပမာဏကိုမဆို မျှဝေနိုင်ပြီး မျှဝေနိုင်မည့် ပမာဏကို သတ်မှတ်ပြီးပါက မျှဝေနိုင်သည့် လူအရေအတွက်ကိုမြင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Data Share အပိုဆုကြေးကို မည်သူတောင်းခံနိုင်သလဲ?
Data share link ကိုလက်ခံရရှိသော Telenor ကြိုတင်ငွေဖြည့်သုံးစွဲသူများအားလုံး ၎င်း ဒေတာအပိုဆုကို link active ဖြစ်နေသ၍ (သို့) အခြားသူများရယူပြီးမကုန်သေးက၍ ရယူနိုင်ပါသည်။
Share Data Link နှင့် Share Data ၏ အပိုဆုသက်တမ်းမှာ ဘယ်အထိလဲ?
ဒေတာကိုမျှဝေသည့်နေ့ (သို့) ဒေတာအပိုဆုကို ရရှိသည့်နေ့မှ စတင်ပြီး ၃ ရက် အတွင်းဖြစ်ပါသည်။
အခြားသူများထံမှ အပိုဆုကိုထပ်မံ ရရှိပါက မိမိ၏ Data Share ၏အပိုဆုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သလား?
သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ Data Share အပိုဆုကိုထပ်မံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာအပိုဆု သက်တမ်းကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Lucky တံတား ၏ ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဘယ်နှစ်ရက်လဲ?
စက်တင်ဘာ (၂၈) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရက်ပေါင်း (၉၀) အထိဖြစ်ပါသည်။
Lucky တံတား ကို ဘယ်နေရာတွင်ဆော့ကစားနိုင်သလဲ?
Lucky တံတား ကို MyTelenor App Version 3.21 တွင်သာဝင်ရောက်ဆော့ကစားနိုင်ပါသည်။
MyTelenor App ကိုဘယ်မှာရယူနိုင်မလဲ?
-Google Play Store and iTunes store http://bit.ly/mytelenormm
-Send “APP” to 500 and get download link for free
-Dial *979*5*5# and get download link for free